Michael Keating oo ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan Shirka London – Balcad.com Teyteyleey
Iyadoo maalinta khamiista uu magaaladda London ka furmayo shir Caalami ah oo lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya ayaa wakiilk gaar ah ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay haysato fursad qaali Get the best Xalatan deals at our online store today! Take a look at our offers and buy your Xalatan for only 62.15 USD! ah oo ay ku soo bandhigto waxyaabaha mudnaanta u leh iyo in laga wad-hadlo iskaashiga dhaxmaraya dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka.
Keating oo wareysi siiyey barnaamijka Tubta Nabadda wuxuu sheegay in shirka looga hadli doono maalin-galin lagu sameeyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo qaab dhismeedka mustaqbal ee ciidamada amniga dalka yeelanayo.
Wuxuu kaloo xusay in ajendaha shirka sidoo kale looga hadli doono heshiisyada dhaxmaray dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, sida awood qaybsiga, canshuuraha, qaybsiga daqliga, kheyraadka dalka uu leeyahay, dib u eegis lagu sameeyo dastuurka dalka iyo sidoo kale sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah.
Ergayga gaarka ahi wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in shirka lagu casuumo madaxweynayaasha Maamul goboleedyada dalka oo ay tahay arrin aad u muhiim, waxaana uu qiray in Madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay hoggaamiyaha qaranka Soomaaliya.
Somaliland: “Shirka London nama Khuseeyo, laakiin wixii Soomaali ahaan loo bixinayo qeyb ayaynu ku leenahay” (Dhageyso)